Window 10 Style လေးကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တော်တော်လေးကိုလန်းတယ်ဗျာ။ အခုဖုန်းပေါ်မှာ Window 10 Theme လေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ 21-Nov ရက်နေ့ကမှအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Version လေးကိုတင်ပေးထားတာပါ။ Window User တွေတောင် Window 10 ကိုမသုံးကြည့်ဖူးသေးဘူး အခု Android Phone သုံးတဲ့သူတွေကတော့ အခုသုံးနိုင်ပြီဗျာ။ အထဲမှာရှိတဲ့ Icon တွေကလည်း အားလုံး Window 10 မှာရှိ တဲ့ Icon တွေနဲ့ ပုံစံအတူတူ ဖန်တီးထားပါတယ်။ Launcher တော်တော်များများနဲ့ လည်းတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android Application , Android Launcher
♪ ကွန်ပြူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာစေမယ့် - Avira System Speedup v4.2.1.6365 Full Version ♫
ကွန်ပြူတာရဲ့ နှေးကွေးနေတဲ့ Speed ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Software အသစ်လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Avira ကအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Avria System Speedup ဆိုတဲ့ Software လေးပါဗျာ။ Avria ဆိုတာနဲ့ Antivirus လို့ထင်သွားဦးမယ်နော်။ Computer Slowed ဖြစ်နေတာတို့ programs, logs, junk files, ဖြစ်နေတာတို့အတွက် error တော်တော်များများကို Cleaner လုပ်ပေးတဲ့ဆော့စ်ဝဲ တစ်ခု ပါ။ ကွန်ပြူတာရဲ့ System Error တွေ ကိုရှင်းလင်းပေးပြီး Speed ပိုမိုမြန်ဆန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေး မယ့် Tools လေးတစ်ခုပါဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Keygen ကိုပါထည့် သွင်းပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ Windows 8 (32-bit or 64-bit) Windows7(32-bit or 64-bit) Windows XP (32-bit) များ မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
Key features of Avaira System Speedup :
Delete all interrupted files with no hope to recovery.
It fixed the bugs in the registry.
Analyses hard disk and optimizes its speed.
Diagnose all the problems automatically.
It helps you to recover all files and to boost up your systems.
Detects all junk files and remove them automatically in minutes.
Furthermore, it detects and removes all the registry errors.
Provides guarantee that hackers cannot retrieve your deleted data.
Erase all the browsing data history.
Increase the consumption the battery of your laptops.
Single click working environment.
Latest Version Updates: Avira System SpeedUp 4.2.1.6365 Free Free download
There are the following system requirements which are necessary for the proper function of the software.
First download the version from the given link.
Open the Crack.exe file.
Then copy the generated code.
After that paste in the activation key.
Now enjoy the full feature of “Avira System Speedup Crack”.
အမျိုးအစား: Computer Software , PC Speed Up , Software
♪ Messenger Official Version အသစ်ထွက်ပါပြီ - Facebook Messenger v145.0.0.25.203 Apk (22-Nov) ♫
ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြ Facebook Messenger Application ဟာ Official Version အဖြစ် 22-Nov မှာအသစ်ထွက် လာခဲ့ပါပြီ။ Version အသစ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ Video တွေရိုက်ရာမှာ Effect လေးတွေအများကြီးထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Update လိုချင်သူများ Update လုပ်မရသူများအောက်က Link ကိုဒေါင်းယူနိုင် ပါပြီဗျာ။ Android OS အားလုံးအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android Application , Facebook Messenger apk
♪ Facebook Official Version အသစ်ထွက်ပါပြီ - Facebook v151.0.0.44.205 Apk (22-Nov) ♫
ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြ Facebook Application ဟာ Official Version အဖြစ် 22-Nov မှာအသစ်ထွက် လာခဲ့ပါပြီ။ Update လိုချင်သူများ Update လုပ်မရသူများအောက်က Link ကိုဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီဗျာ။ Android OS အားလုံးအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
♪ ZD Soft Screen Recorder v11.1.2 Full Keygen ♫
PC ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို Video Record အဖြစ်ဖမ်းယူထားပေးနိုင်တဲ့ ZD Soft Screen Recorder v6.7 နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိကွန်ပြူတာ Screen recording software program လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Video Resolutions နှင့် Frame Fates တွေကိုလည်းကိုယ်လိုသလိုဖျတ်တောက်ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။recording ရဲ့ အချိန် ကြာမှု့ကိုတော့ ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူး။PC game screen တွေကအစရိုက်ယူနိုင်ပြီး audio/video ကို မိမိကြိုက် သလိုပြောင်း လဲနိုင်ပါတယ်။ Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Keygen ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ့ လာနိုင်ဖို့ အတွက်အာက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Computer Software , Software
▼ 2017 ( 2937 )
♪ ကွန်ပြူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာစေမယ့် - Avira Syste...
♪ Advanced SystemCare Pro v11.0.3.188 Final Full V...
♪ SUPERAntiSpyware Professional v6.0.1250 DB 14113...
♪ TeamViewer Corporate v12.0.88438 + Patch ♫
Quick Shortcut Maker နဲ့ Google အကောင့် Sign In ၀င်မရခြင်း Unfortunately ပြပြီး ပြန်ထွက်သွားလျှင် မိမိဖုန်းဗားရှင်းအလိုက် Google အေ...
♪ Microsoft-Excel-2010 အသုံးပြုနည်းစာအုပ် (မြန်မာဘာသာပြန်) ♫
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့်လူငယ်များနဲ့ Excel ကိုသေသေချာချာ လေ့လာချင်သူများအတွက် Microsoft-Excel-2010 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးးတစ်အုပ်တင်ပေး...
♪ Lock ချထားတာတွေကို ခိုးဖွင့်တဲ့သူကိုဓါတ်ပုံရိုက်ဖမ်းနိုင်တဲ့ - CM Security AppLock & AntiVirus VIP v4.3.0 Apk (21-Nov) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ CM Security ဆိုတာကတော့ Security ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မိမိရဲ့ဖုန်းကို တကယ့်ကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတောင် ပိတ်ထားပေးနိုင်တ...